कसरी खानेकुरा पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुन्छ ? – Yug Aahwan Daily
कसरी खानेकुरा पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुन्छ ?
युग संवाददाता । २५ माघ २०७६, शनिबार १३:०८ मा प्रकाशित
567 पटक हेरिएको
प्रकृतिले हामीलाई यस्ता खानेकुरा दिएका छन्, जसले शरीरलाई बचाइराख्नका लागि आवश्यक पोषक तत्व प्रदान गर्छ । हरेक खानेकुरामा आफ्नै किसिमको पोषक तत्व हुन्छ । ति पोषक तत्व सन्तुलित मात्रामा शरीरले ग्रहण गर्छ । सोही अनुरुप सन्तुलित खानपान गर्नुपर्छ ।
कति खानेकुरा पकाएर खाइन्छ, कतिपय काँचो खाइन्छ । खानेकुरा पकाउँदा अक्सर हाम्रो ध्यान के हुन्छ भने, त्यसलाई कसरी स्वादिलो बनाउने ? तर, हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहि के कुरामा हो भने, कसरी त्यसको पोषक तत्वलाई सुरक्षित राख्ने ? खानेकुरा विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् ।
ति खानेकुरा पकाउँदा कसरी त्यसमा भएको पोषक तत्व सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरामा हामीले हेक्का राख्नैपर्छ । नभए त खाना खानु र भुस खानु एउटै हो, जसले पेट मात्र भर्छ । शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वका लागि पनि ठाउँ ओगट्छ ।
खाना विभिन्न तरीकाले पकाइन्छ । कुनै खाना तारेर त कुनै उसिनेर पकाइन्छ । कुनै ग्रील गरिन्छ त कुनै हल्का फ्राई गरेर पकाइन्छ । खाना पकाउने तरीका पनि आ–आफ्नै हुन्छ । विभिन्न तरीकाले पकाउदा पनि कहिलेकाही जानेर वा नजानेर हामी खानामा भएको सम्पूर्ण पोषण तत्व सरक्षित गर्नमा असफल हुने गर्छौ ।
परिणामस्वरुप, स्वास्थ्यवर्दक तरीकाले खाना पकाउँदा पकाउँदै पनि ती खानेकुरामा भएको आवश्यक पोषण तत्व ग्रहण गर्नमा हामी असर्मथ हुन्छौ । यसको पछाडी दुईटा कारण मुख्य मानिन्छन् । कि त हामी खानालाई धेरै पकाउँछौ, या त काच्चै राख्छौ ।
भिटामिन बी, सी, फोलेट लगायतको पोषण तत्व वाफ वा तातोमा बढी संवेदनशील हुन्छ, जसका कारण त्यसमा भएका आवश्यक तत्व क्रमश कम हुँदै जान्छ । खानामा भएका पोषण तत्व कम हुनुमा पकाउने समयावधी तथा आगोको रापले पनि धेरै प्रभाव पार्दछ ।
जबकी कम समयमा खाना पकाउने तरीका, तापक्रम तथा पानीको मात्राले पनि खानामा भएको पौष्टिक तत्वलाई संरक्षित गर्न निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । यस हिसाबले भन्नु पर्दा हरिया सागसब्जी पकाउने सबै भन्दा राम्रो उपाय भनेको उसिन्नु हो । साजसब्जलाई उसिनेर पकाउदा यस्ता खानेकुरा छिटो पाक्नुका साथै यसमा भएका पोषणतत्व समेत नष्ट हुन पाउँदैन ।
खानामा पौष्टिक तत्वलाई कायम राख्न सागसब्जी तथा फललाई उचित तरीकाले काट्नु पर्छ । सागसब्जी वा तरकारीलाई ससाना टुक्रा बनाएर काट्दा त्यसमा भएका पौष्टिक तत्व नष्ट हुने सम्भावना धेरै हुने गर्छ । त्यस्तै, सागसब्जीलाई काटेपछि पानीमा डुबाउनले पनि कतिपय खानेकुरामा भएका पौष्टिक तत्व पानीमा घुलेर नष्ट हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ ।
त्यस्तै, सलाद तयार पार्दा खानेबेलामा मात्र तयार पार्नु पर्छ र हावाको सम्पर्कमा नआओस् भन्नका लागि राम्ररी छचोप्नु पर्छ । खाना पकाउनु अघि र पकाउँदा खानामा रहेको पोषण तत्वलाई नष्ट हुन नदिन पनि यी कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ । जुन यस प्रकार छ :
अपनाउनुहोस् यी काइदा
– तेल, वटर लगायतका फ्याटको प्रयोग गर्ने
– हरिया साजसब्जी थोरै आलोकाचो नै रहन दिने
– खाना पकाउदा थोरै पानीको प्रयोग गर्ने
– खानामा अमिलो मिसाउने
– ताजा खाना खाने
– खानामा फ्याक्ट प्रयोग बढाउने
खाना पकाउँदा हामी प्रायः पानीको प्रयोग गर्छौ । जबकी कुनै पनि हरिया सागसब्जीलाई धेरै बेर उमाल्नु हुँदैन । यसले खानामा भएको पोषण तत्व हराउन सक्छ सागसब्जीमा पाइने पोषण तत्वलाई सुरक्षित राख्नका लागि पकाउँदा थोरै पानीको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
खानामा अमिलो समावेश गर्ने । ब्रोकाउली, पालुङ्गो लगायतका सागसब्जीमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइन्छ । खाना पकाउँदै गर्दा यस्ता खानेकुरामा भिटामिन सी, कागती, वा अन्य कुनै अमिलो पर्दाथ मिसाउनाले आइरन सोस्न मद्दत मिल्छ । त्यस्तै, कागती, सुन्तला आदीले शरीरमा पोषण तत्व अवशोषित गर्न मद्दत गर्छ ।